सामाजिक वेब सुइट: एक सामाजिक मीडिया प्रबंधन प्लेटफार्म WordPress WordPress प्रकाशकहरूको लागि निर्मित | Martech Zone
यदि तपाईंको कम्पनीले सामग्री प्रमोट गर्न सोशल मीडियालाई प्रभावकारी ढ publish्गले प्रकाशित गर्दै र प्रयोग गरिरहेको छैन भने, तपाईं वास्तवमै ट्राफिकको केही बेरमा हराउनुहुनेछ। र ... राम्रो नतीजाहरूको लागि, प्रत्येक पोष्टले वास्तवमा केहि अनुकूलन प्रयोग गर्न सक्दछ जुन तपाईंले प्रयोग गरिरहनु भएको प्लेटफर्ममा आधारित छ।
हालसालै तपाईका स्वचालित प्रकाशनका लागि केहि विकल्पहरू छन् WordPress site:
बहुसंख्यक सोशल मिडिया प्रकाशन प्लेटफर्महरूमा एक सुविधा हुन्छ जहाँ तपाईं RSS फिडबाट प्रकाशित गर्न सक्नुहुनेछ।
वैकल्पिक रूपमा, तपाईं एक प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ फिड प्लेटफर्म तपाइँको फिड पनि अपडेट भएपछि स्वचालित रूपमा प्रकाशित हुन्छ।
WordPress 'कम्पनी पनि प्रदान गर्दछ jetpack जसमा तपाईंको पोस्ट तपाईंको सोशल च्यानलमा पुश गर्न एक सार्वजनिक विकल्प छ।
प्रत्येक केसमा तपाईले आफ्नो सामाजिक मिडिया खाताहरू थप्नुभयो र एक पटक तपाईंको फिड अपडेट भयो भने, सन्देश भेला हुन्छ र उपयुक्त च्यानलबाट बाहिर प्रकाशित हुन्छ। तिनीहरू राम्ररी काम गर्दछन्, तर त्यहाँ सबै को एक विशाल सीमा छ।
कता पोष्ट शीर्षक खोजीको लागि अनुकूलित हुन सक्छ,aसामाजिक मिडिया पोष्ट थप ध्यान आकर्षण गर्न अधिक मोहित हुन र ह्याशट्यागको प्रयोग गर्न चाह्न सक्छ। नतिजाको रूपमा, सोशल मीडियाको पूर्ण लाभ लिन चाहने प्रायः प्रकाशकहरूले आफ्नो सामाजिक मिडिया अपडेट लिन्छन् र हेन्डक्राफ्ट गर्छन्। जबकि प्रत्येक प्लेटफर्ममा सम्पादन गर्न र प्रकाशन गर्न यसले केहि मिनेट लिन्छ, परिणामहरू तपाईंको फिडलाई बाहिर धकेल्नुभन्दा नाटकीय रूपमा राम्रो हुन सक्दछन्।
सामाजिक वेब सुइट
टीना टोडोरोभिक र डेजन मार्कोभिकले एक वर्डप्रेस प्लगइन निर्माण गर्‍यो जुन बफरसँग एकीकृत भयो। तर जब उनीहरूले अधिक र अधिक अनुरोध अनुरोधहरू प्राप्त गर्न सुरू गरे जुन बफरसँग थिएन, तिनीहरूले आफ्नो प्लेटफर्म निर्माण गर्ने निर्णय गरे सामाजिक वेब सुइट। सामाजिक वेब सुइटले वर्डप्रेसमा अधिक सख्त एकीकरणको साथ सबै सामाजिक मिडिया प्रबन्धन प्लेटफर्मको आवश्यकता समावेश गर्दछ। यी सुविधाहरू मध्ये केही समावेश:
केवल पोष्टहरू, तर पृष्ठहरू, कोटीहरू, र ट्यागहरू एकीकृत गर्न क्षमता!
तपाइँका पोष्टहरू तत्काल सामाजिक खातामा प्रकाशित हुन्छन् जुन ती वर्डप्रेसमा प्रकाशित हुन्छन् र फेरि उनीहरूको कोटीको पछाडि सारिन्छ जुन फेरि पुन: साझेदारी गर्न सकिन्छ!
साधारण स्वचालन जसले तपाईंको सामाजिक मिडिया पोष्टहरूमा पोष्टको कोटी वा ट्यागलाई ह्यासट्यागमा रूपान्तरण गर्दछ।
UTM भ्यारीएबलका साथ स्वचालित गुगल एनालिटिक्स अभियान URL हरू स्वचालित रूपमा ट्याग गरियो।
सोशल मीडियामा द्रुत रूपमा प्रकाशित गर्नु भन्दा पोष्टहरू प्रकाशनका लागि उत्तम समयको लागि लामबद्ध गरिएका छन्।
सदाबहार पोष्टहरू फेरि प्रकाशित गर्न सकिन्छ।
पूर्ण प्रकाशन पात्रोले तपाइँलाई के र कहिले प्रत्येक अपडेट प्रकाशित हुन्छ भन्नेको स्पष्ट दृश्य प्रदान गर्दछ।
सामाजिक वेब सूटको साथ सबै प्रमुख सामाजिक मिडिया प्लेटफर्महरूको लागि व्यापक समर्थन छ। तपाईं फेसबुक पृष्ठ वा समूह, इन्स्टाग्राम वा इन्स्टाग्राम व्यवसाय खाता, ट्विटर, लिंक्डइन प्रोफाइल वा पृष्ठमा प्रकाशित गर्न सक्नुहुनेछ। र, यदि तपाईं आफ्नो यूट्यूब भिडियो वा अन्य आरएसएस फिड ल्याउन चाहानुहुन्छ भने, तपाईं त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ।
सामाजिक वेब सूट सबैभन्दा शक्तिशाली सामाजिक शेड्यूलिंग उपकरण हो जुन मैले कहिल्यै प्रयोग गरेको छु। म हाल सामाजिक वेब सुइटले के गर्न को लागी धेरै उपकरणहरू प्रयोग गरिरहेको छु, र सामाजिक वेब सुइटको ठाउँ लिनको लागि धेरै उत्साहित छु! सामाजिक वेब सुट ब्लगर्स र साना व्यवसायका लागि खेल परिवर्तनकर्ता हो र समय तालिका पोस्ट यति सजिलो बनाउँदछ!
यस जस्तो पूर्ण सोशल मिडिया प्रबन्धन मञ्चको लागि मूल्य निर्धारण वास्तवमै सस्तो हुन्छ। तपाइँ एकल प्रयोगकर्ता खाताबाट सुरू गर्न सक्नुहुन्छ जुन social सामाजिक मिडिया खातामा प्रकाशित हुन्छ र व्यापार खातामा सबै मार्गमा सर्दछ जुन users प्रयोगकर्ताहरू र social० सामाजिक मिडिया खाताहरूलाई अनुमति दिन्छ।
सामाजिक वेब सुइटको १--दिन परीक्षण सुरू गर्नुहोस्
खुलासा: म एक सम्बद्ध हुँ सामाजिक वेब सुइट.
टैग: फेसबुकफेसबुक समूहफेसबुक प्रोफाइलइन्स्टाग्रामइन्स्टग्राम व्यवसाय प्रोफाइलLinkedInलिंक भएका पृष्ठहरूलिंक गरिएको प्रोफाइलहरूसामाजिक मिडियामा आरएसएससामाजिक मिडिया क्यालेन्डरसामाजिक मिडिया पोष्टिंगसामाजिक मिडिया प्रकाशनसामाजिक मिडिया प्रकाशन प्लेटफर्मसामाजिक मिडिया तालिकासामाजिक वेब सूटtwitterWordPressWordPress प्लगइनयूट्यूब सोशल मिडिया को लागी
इन्फ्लुएन्सर एक्टिभ: तपाईको अर्को प्रभावकारी मार्केटिंग अभियानको लागि सजीलै B2B प्रभावकारीहरू खोज्नुहोस्
रेफरल कारखाना: तपाईंको आफ्नै रेफरल मार्केटि Program कार्यक्रम सुरू गर्नुहोस् र चलाउनुहोस्